Rugby seksiona Ambohidratrimo: “Tontosa avokoa ny fifaninanana rehetra”, hoy i Richard | NewsMada
Rugby seksiona Ambohidratrimo: “Tontosa avokoa ny fifaninanana rehetra”, hoy i Richard
Mbola miato koa amin’izao fotoana izao ny rugby, eny amin’ny seksiona Ambohidratrimo. Na izany aza, efa nahatontosa ny fifaninanany izy ireo ary efa manomana sahady ny ho fiatrehana ny taom-pilalaovana vaovao.
Gazety Taratra (*): Aiza ny filohan’ny seksiona rugby Ambohidratrimo no mihiboka?
Rakotomalala Richard (-): Ato an-trano ihany izaho no manao fihibohana sady miasa satria moa ny tena, mamelom-bady aman-janaka sady manampy ireo ray aman-dreny.
*: Miaraka amin’iza ianao manao fihibohana?
-: Tsy hoe tena mihiboka tanteraka fa mivoaka miasa ny trano ny tapak’andro maraina, ary mitohy ny alina izany, satria izay ilay fivelomana. Ao anatin’izazny ny ahitana ireo namana mpilalao rugby sy ireo ankizy tezaina. Miaraka amin’izy ireo izany raha izay ny ilazana azy.
*: Nanao ahoana ny taom-pilalaovana lasa, ho an’ny seksiona Ambohidratrimo?
-: Vita avokoa ny fifaninanana, D1, Elite 2 sy ny D2 ary ny D3, na betsaka aza, ireo fanelingelenana teny an-dalana. Teo koa ny tsy fahampian’ny kianja izay tena nanahirana. Ankoatra izay, nisy ny tsy fitovian’ny sainay samy seksiona. Tsy misy ligy mitantana mantsy izahay ka tena nahatsiaro ho kamboty.
*: Hanao ahoana ny ho fiatrehana ny taom-pilalaovana vaovao?
-: Miankina amin’ity fihibohana ity hoe: rahoviana ny ho tapitra. Na izany aza, manaitra ireo fileovana rehetra tsy hatoritory na eo aza ny fihibohana fa mila mikarakara ny kara-pilalaovana any amin’ny federasiona, amin’izay tsy lany fotoana sy tsy mifampiandriandry, rehefa tapitra ny fihibohana. Ankoatra izay, aza helingelenina intsony ny zavatra rehefa mandeha satria matoa izahay voafidy, mahafantatra ny tokony hitondrana azy fa tsy ny olona voatendry no hanakorontana. Tsy misy karama io fa atao am-pitiavana. Fampiharana ny lalàna sy ny fitsipi-dalao ny ataonay. Ho an’ny fanjakana, aza ampidirana politika ny fanatanjahantena fa mamotika zavatra betsaka.
*: Hafatra avy amin’ny filohan’ny seksiona Ambohidratrimo?
-: Tsy mahakasika fanatanjahantena loatra ity hafatro ity. Aleo hangarahara ny fanampiana satria mahita izahay fa tsy misitraka izany ny olona tokony hahazo. Na izany aza, isaorana ireo tsara sitrapo manampy. Ankoatra izay ny amin’ity fahazoan-dalana ity, satria miasa amin’ny “securité civile” izahay ka amin’ny alina no manao izany. Tokony hatao mazava ilay baiko ho an’ireo mpanao sakana. Lasa voahelingelina izahay amin’ilay fanatanterahana ny asanay. Henonay mantsy ny hoe ny fivoahana any amin’ny faritra no tsy mety intsony fa tsy ny ato anatiny.